Ihe ngwọta ọzọ maka nsogbu na ngwaọrụ USB na Lucid | Site na Linux
Ihe ngwọta ọzọ maka nsogbu ngwaọrụ USB na Lucid
O doro anya na e nwere ahụhụ na Ubuntu 10.04 Lucid Lynx nke na-emetụta ngwaọrụ USB ma gbochie ha ịkwago onwe ha mgbe ha jikọtara, nke pụtara na ngwaọrụ ahụ agaghị egosi na desktọọpụ na agaghị agbakwunye ya na Nautilus.
En WebUpd8 na saịtị ndị ọzọ na-ekwu na ihe kpatara nsogbu ahụ bụ a BIOS ọnọdụ metụtara anyị floppy mbanye. Iji dozie ya, ihe ị ga - eme bụ ịmalitegharị kọmpụta ahụ, banye na BIOS na ebe ọ na - ekwu na Floppy họrọ “Onye nkwarụ” karịa “Legacy Floppy”.
Njikere, site ugbu a gaa n'ihu, mgbe ị na-ebu Ubuntu, akpaaka nke ngwaọrụ USB gị ga-arụ ọrụ dịka ọ dị na mbụ ma a ga-agbanye ha na Nautilus, dịka o kwesiri.
Nke a doziri nsogbu gị na ngwaọrụ USB? Hapụ ihe ị kwuru ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Ihe ngwọta ọzọ maka nsogbu ngwaọrụ USB na Lucid
Nchacha - isiokwu Lucid mara mma nke na-eme ka Radiance dịkwuo elu
Xubuntu: distro nke tụfuru mkpa niile?